Volamena any Betsiaka : tsy mitondra fampandrosoana ho an’ny mponina | NewsMada
Volamena any Betsiaka : tsy mitondra fampandrosoana ho an’ny mponina
Milaza ny fitondrana fa maherin’ny 2 taonina ny volamena naondran’i Madagasikara any ivelany ny taona 2017 teo. Lazaina fa sambany nisy an’io vokatra io, saingy tsy fantatra ny antony ireharehana toy izany. Avy any Betsiboka, indrindra ao amin’ny kaominina Antanimbary Maevatanana ny ankamaroan’ireo volamena mivoaka ireo, azon’ny mpitrandraka madinika. Misy koa ny avy any Betsiaka, Ambilobe, trandrahin’ny sinoa efa nanomboka ny taona 2015. Mikasika ity farany, misy ireo fokonolona mpitrandraka madinika, fa eo koa ny fampiasany fitaovana vaventy, toy ny nokasainy natao teny Soamahamanina.
Tsy misy mijanona eto Madagasikara ny volamena na iray aza, na tokony ho mila azy aza ny Banky foiben’i Madagasikara (BCM), sady hampiaka-danja ny sandam-bola Ariary rahateo. Antony, tsy manana politikan’ny vola matotra sy matipaika ny fitondrana, fa avoaka gaboraraka omena ny vahiny ny harena voajanahary.
Etsy ankilany, tsy mitondra fampandrosoana, tsy manatsara ny fari-piainan’ny mponina any ifotony nivoahan’ny harena ny fitrandrahan’ny vahiny, fa zara mahazo karama vary masaka (farany ambany) amin’ny asa isan’andro, tsy fiahiana sosialy, tsy misy antoka. Endriky tsikomban’ny fitondrana sy ny vahiny, mandripaka ny harena eto amintsika avokoa izany.
Potiky ny arsenic ny fahasalaman’ny mponina
Any Brezila, potika ny fahasalaman’ny mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana volamena, vokatry ny fampiasan’ny orinasa kanadiana akora simika arsenic, amin’ny fitrandrahana volamena. Akora simika 2,5 taonina no ampiasaina ahazoana volamena 1 grama. Vokany, marary avokoa ny fitaovam-pisefoan’ny mponina, ao koa ny marary ny hoditry ny tarehiny. Nambaran’ny mponina tao amin’ny televiziona frantsay iray, fa « mijanona eto Brezila ny akora simika 2,5 taonina tsy misy vidiny fa lasa any Canada kosa ny volamena 1 grama, nefa lafo vidy ».